29 tayo sare leh CSS iyo madax madax u ah boggaaga weeb | Abuurista khadka tooska ah
Madaxa iyo cagaha ayaa ah Waxyaabaha aasaasiga ah marka la abuurayo bog cusub shabakad ama baloog, ama haddii kale wax kale oo aan u baahannahay inaan cusbooneysiinno si aan ula kulanno heerarka hadda jira ee naqshadeynta websaydhka. Waa meelo banaan oo booqdaha websaydhadeenu inta badan fiiro gaar ah u yeesho, markaa waa inaan daryeelnaa oo aan koolkooliyaa si ku filan si ay isha uga farxiyaan, marka laga reebo inay shaqeynayaan.
Sababtaas awgeed ayaan u wadaagi doonnaa 29 cinwaanada CSS iyo cagaha hoose ee aad ku isticmaali karto bartaada internetka, oo sidaas ku siiya bartaas tayada ah ee aad raadineysay. Liiskani wuxuu ka kooban yahay cinwaanno maqaal buuxa ah, iyo sidoo kale cabbirka caadiga ah, madax go'an ama go'an, cagaha iyo qaar ka mid ah madaxyada fiidiyowga si loo siiyo aragti kale oo websaydhkaaga ah.
1 Madax qalooca
2 Sawirka madaxa Parallax
3 Xaglatooray madax cinwaan
4 Madaxa la jeexjeexay
5 Madax la animation SVG
6 Madax go'an oo leh Div
7 Parallax sawir lakab badan
8 Madaxa boostada oo go'an
9 Cinwaan shaashad buuxda leh animation
10 Geesi sawir shaashad buuxda
11 Flexbox oo leh badhan
12 Flexbox gees madax
13 Mawduuc dheg dheg leh
14 Isukeenida Jawaabta ah ee Ku Dhagan
15 Madaxa Wareeg
16 Madax-wareejinta jawaabta leh
17 Cinwaanka Gudaha / dibedda
18 Madaxa oo libdhi
19 Madaxa oo qarsoon
20 Lugta Parallax
21 Luglaha leh cabbirka maaddada
22 Baraha Bulshada
23 Liistada cagta lugta leh ee dhaqdhaqaaqa ah
24 Fudud Fudud
25 Ka falcelinta Madaxa fiidiyowga
26 Madaxa Video-ga
27 Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka oo buuxa oo leh Isku-qas
28 Video animation cinwaan
29 Madaxa fiidiyow ee jawaabta leh weheliyaha ah
Cinwaan lagu garto qaabkeeda qalooca salka taas oo ka dhigeysa cinwaan aad u qaas ah oo loogu talagalay degel ama degel. Waa CSS saafi ah, sidaa darteed waxay durba qaadaneysaa waqti lagu tijaabiyo shabakadaada sida ay u ekaan doonto hadii aad ku darto bartaada.
Sawirka madaxa Parallax
Iyada oo leh saameyn muuqaal weyn oo Parallax ah, cinwaankan ayaa isku tilmaamaya iyada adeegso booska asalka-muuqaalka CSS. Sawirka cinwaanka waxaa lagu dhejin doonaa dusha sare ee bogga si loo helo koodh saameyn weyn leh.
Xaglatooray madax cinwaan
Cinwaankan si fiican ayaa loogu hagaajiyay xagga sare ee bogga ku kala saar sadarkaas jaantuska ah taasi waxay ka talaabaysaa dhammaan jihooyinka aragtida isticmaalaha. Waxay muujineysaa sida loo adeegsado CSS-been abuurka loo isticmaali karo sameynta madax go'an oo leh sawir asal ah.
Madaxa la jeexjeexay
CSS iyo HTML ee cinwaankan tusaalaha ah ee ku xusan ayaa lagu gartaa oo ay weheliso khadkaas jaantuska ah taasi waxay ka talaabaysaa shaashadda oo dhan dhinac ilaa dhinaca kale.
Madax la animation SVG
Madax aad u fudud, inkasta oo ay isticmaasho animation SVG ah si aad u kala soocdo naftaada kuwaas oo aan ku hayno liiskan. Waxaad marin ka heli kartaa liis ballaaran oo bogag internet ah leh animations SVG halkan.
Madax go'an oo leh Div
Iyada oo saameyn muuqaal leh Parallax, madax go'an oo u taagan saameynta weyn lagu gaadho sawirka asalka ah ee go'an halka inta soo hadhayna ay rogrogayso sida aan jiirka ugu wareejinayno.
Parallax sawir lakab badan
Madaxa boostada oo go'an
Cinwaan shaashad buuxda leh animation
Madax bixiya animation kaas u dhaqaaqo dhinaca dambe taasina waxay soo saartaa saameyn nasasho leh oo ku socota daawadayaasha.
Geesi sawir shaashad buuxda
cunt saameyn zoom, tan madax shaashad buuxda waxaa loo muujiyey inuu yahay mid asal ahaan weyn. Wanaagsan websaydh kaas oo booqdehu uu si weyn u isticmaali doono wareejinta si uu ugu wareego.
Flexbox oo leh badhan
Madax qaadanaya ballaca shaashadda oo dhan si uu u muujiyo badhan. Ku habboon bogagga degitaanka oo leh CSS flexbox.
Flexbox gees madax
Madax leh saameyn parallax iyo flexbox aad u fudud taasi waxay u taagan tahay xarrago qaabkeeda badanaa.
Mawduuc dheg dheg leh
Sida magaceedaba ka muuqata, madax go'an goorma waxaan ku wareejinaa jiirka marka aan dhaqaaqeyno si aad u aragto bogga intiisa kale.
Isukeenida Jawaabta ah ee Ku Dhagan
Madax kale oo go'an oo saameyn weyn leh marka menu-ku gaaro dusha sare ee bogga, waayooo daqiiqadaasna way taagantahay oo waan sii wadi karnaa wareejinta goobta.
Way kaga duwan tahay inta kale animation sax ah oo jilicsan markaan dhaqaaqno. Dhamaadka iyada, madaxa hore ayaa weli lagu hagaajiyaa xagga sare.
Madax-wareejinta jawaabta leh
Cinwaanka Gudaha / dibedda
Madax lagu soocay saamaynta Gudaha / dibedda ka dib markii la duuduubo taasina waxay soo saartaa dareenka soo noqoshada.
Madaxa oo libdhi
Madaxa oo qarsoon
Madax ka duwan marka la qarinayo sida ku cad waxaan u adeegsanaa wareejinta animation taasi waa mid aan la dareemin laakiin tayo sare leh.
Luglaha leh cabbirka maaddada
Lugood tayo sare leh oo asal ah amakaag soo booqdaha habka fadliga leh ee loo soo bandhigo degelkan shabakadda.
Lugle meel taagan badhamada ku haga shabakadaha bulshada ugu caansan. Animation-ka la soo saaray markii laga tagayo tilmaamaha jiirka mid kasta oo ka mid ah shabakadaha bulshada ayaa taagan.
Liistada cagta lugta leh ee dhaqdhaqaaqa ah
Adoo yareynaya daaqada biraawsarka si aad u daawatid lugtaan, waad awoodi doontaa hel qaybaha 2-3 in isticmaalaha uu ka heli karo aaladda gacanta. Waxaa lagu soo bandhigaa 767px.
Lagu sameeyay HTML iyo CSS waa a lug fudud oo aan faan iyo faan badan lahayn.
Ka falcelinta Madaxa fiidiyowga
Madax leh Fiidiyow fudud 'React.js.
Kuwa kale madax leh fiidiyow fudud oo tayo sare leh.
Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka oo buuxa oo leh Isku-qas
Muuji a fiidiyowga shaashadda buuxa leh qoraalka lakabka adoo adeegsanaya qaab isku dhafan.
Video animation cinwaan
Animation ahaa loo habeeyay Adobe After Effects inaad la jaanqaadi karto dhammaan daalacashada. Kuma shaqeeyo mobilka.
Madaxa fiidiyow ee jawaabta leh weheliyaha ah
El Wehliyaha waa waxa taagan cinwaanka fiidiyowga inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 29 cinwaanada CSS iyo salka hoose ee balooggaaga ama boggaaga
Dhammaantood way i qanciyeen. Mahadsanid
Boostada loogu talagalay dadka jecel daabacaadda warqadda
Nintendo wuxuu ku dhawaaqay Mario filim filim ah